I-Crittercism: Ukuqapha Ukusebenza Kokusebenza Kweselula | Martech Zone
UMsombuluko, May 5, 2014 Douglas Karr
Ukugxekwa is a ukuphathwa kokusebenza kweselula ipulatifomu esetshenziselwa ukuqapha, ukubeka phambili phambili, ukuxazulula inkinga, nokuthambekisa ukusebenza kohlelo lwakho lokusebenza lweselula. ICrittercism inikeza umbono wesikhathi sangempela womhlaba wonke wokuxilongwa kohlelo lokusebenza namaphutha wohlelo kuyo yonke i-iOS, i-Android, iWindows Phone 8, izinhlelo zokusebenza zeHybrid ne-HTML5 eziqapha abasebenzisi abasebenzayo abangu-1 billion njalo ngenyanga.
ICrittercism iqaphe izimo zokufaka izicelo ezingaphezu kwezigidi ezingama-500, ilandelela imithwalo yohlelo lokusebenza engaphezu kwezigidigidi eziyikhulu, ehumusha izehlakalo ezingama-100 ngomzuzwana kanye namakhasimende asebenzayo ayizinkulungwane eziningana. Izici zifaka:
Multiple OS nokusekelwa kwedivayisi - iOS, i-Android, i-HTML5, i-Windows Phone, noma izinhlelo zokusebenza ze-Hybrid
Isikhathi sangempela sedatha enkulu - ukuthengiselana okuyizigidi eziyizinkulungwane ezintathu ngosuku kudluliselwe ekuqondeni kwangempela, okusebenzayo.
Amadeshibhodi & Imibiko Izaziso - qapha izinhlelo zokusebenza zokukhiqiza ngesikhathi sangempela. Gcina amathebhu wokuthi izinhlelo zakho zokusebenza zithuthuka kanjani ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuphepha kwe-RBAC, Ukuphepha Kwemininingwane - Imininingwane ivikelekile futhi ubunikazi bomsebenzisi wokugcina butholakala ngokuphepha.
Ukutholakala nokuqapha ukusebenza - qapha futhi unikeze ama-SLA ekusebenzeni kwepulatifomu.
Yakhelwe Isikali - kusuka ezitolo ezizimele zentuthuko kuya ezinkampanini ezinkulu zomhlaba wonke.
Tags: androidapmukuqapha ukutholakala kohlelo lokusebenzaukuqapha uhlelo lokusebenzaukusebenza kohlelo lokusebenzaukuqapha ukusebenza kohlelo lokusebenzaukugxekwaData SecurityIzinhlelo zokusebenza ze-HTML5HybridiOSuhlelo lokusebenza lweselulaukuphathwa kokusebenza kweselulaUkuphepha RBACI-Windows Phone 8